Bayern Munich oo si lama filaan ah ugu soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Pogba – Gool FM
Bayern Munich oo si lama filaan ah ugu soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Pogba
(Munich) 12 Maajo 2022. Bayern Munich ayaa si lama filaan ah ugu biirtay tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga khadka dhexe reer France ee Paul Pogba, kaddib markii la sheegay inuu ka tagayo kooxda Man United.
Qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska uu kula jiro Red Devils ayaa dhacaya bisha June ee soo socota, taasoo u ogolaaneysa inuu si bilaash ugu saxiixdo koox kasta.
Sida laga soo xigtay wargeyska, “La Gazzetta dello Sport”, kooxda Bavarian-ka ayaa xiiseynaya inay ku hesho adeegga 29-sano jirkan beeca xurta ah.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda heysata horyaalka Bundesliga ay mar hore dalab ka gudbisay xiddiga Man United, kaasoo sida ay warbixinada sheegayaan ku dhow inuu ku biiro Paris Saint-Germain.
Inkastoo Bayern Munich ay heysato ciyaaryahano khadka dhexe ah aad u wanaagsan, oo ay ka mid yihiin Joshua Kimmich iyo Leon Goretzka, haddana suurtogalnimada ah inay ka tagaan kooxda xiddigaha kala ah bixitaanka macquulka ah ee Corentin Tolisso iyo Marc Roca ayaa ku riixeysa inay helaan badelkooda suuqa xagaaga ee soo aadan.
Waxaa xusid mudan in Juventus ay sidoo kale xiiseyneyso inay dib u soo ceshato xiddiga reer France, kaasoo u soo ciyaaray intii u dhaxeysay 2012 ilaa 2016, kahor inta aan laga iibin Manchester United.
Muxuu ka yiri Kevin De Bruyne kaddib AFARLEEYDII uu ka dhaliyay kooxda Wolves??